Ciyaaraha doorka lagu ciyaaro ee ugu fiican PC | Golaha Moobaylka
Ciyaaraha doorka ugu fiican ee kombuyuutarka
Haddii ay jiraan nooc nooga dhaca saacado iyo saacado nolosha bulshada ah oo saaxiibbadeen ka dhigaya inay la yaabban yihiin inaan weli nool nahay, kuwani waa kuwa RPG ama ciyaaraha lagu ciyaaro halkaas oo qoto dheerida iyo horumarka dabeecadeena ay lama huraan u tahay hormarka. Dhammaantood waxaa weheliya a sheeko wacan iyo qoraal filim ah, taas oo sidoo kale muujineysa dagaal qoto dheer oo xiiso leh oo nagu dhiirrigeliya inaan sii wadno hagaajinta. Tani waa nooc aad u hodan ah, oo aan ka heli karno adduunyada macquul ah, kadib-apocalyptic, fantastik iyo mustaqbal.
Noocani maahan midka ugu faanista badan qaybta farsamada, laakiin waxaan leenahay waxyaabo ka reeban oo jabiya tirakoobka, kuna raaxeysta qeyb farsamo oo cajiib ah oo buuxineysa adduunkeeda weyn ee nolosha. Waxa qof walbaa wadaago waa mid dareemid horumar joogto ah iyo hawlgallada labaad ee aan la soo koobi karayn oo na siin doona saacado iyo saacado ciyaar ah oo aynaan dareemaynin inaan ku dhegan nahay. Haa, waa inaan helno fikradda aan heli doonno ciyaaro wax badan akhri oo samir markay tahay inaad horay u socoto sheekadaada. Qodobkaan waxaan ku sheegaynaa inaan xusno waxa innaga ah kulamada doorka ugu fiican ee kombuyuutarka lagu ciyaaro.
1 Cyber ​​Punk 2077
2 Witcher 3 The
3 Saamaynta Genshin
4 lamadegaanka 3
5 Caalamka Dunida
6 Yaxaas Hunter Adduunka
Shaki la'aan mashruuca ugu hanka badan ee CDProjektRed, waa a ciyaar la dejiyay sanadka 2077 oo ka dhacda magaalo weyn oo la yiraahdo Night City. Magaalo weyn oo nolosha ah oo aan ka helno boqollaal hawlgallo labaad ah, iyo sidoo kale sheeko weyn oo weyn oo naga dhigaysa inaan ku sii baaho mustaqbal aan fogayn oo si faahfaahsan u soo baxay. Sida RPG kasta, nuxurkeedu waa mid aad u ballaaran, iyo waliba ku-dhowaansho aan dhammaad lahayn oo dabeecadeena ah.
Waxaan helnaa geed xirfad weyn leh halkaas oo aan ku horumarin karno dabeecadeena si aan ugu bedelno mid yar oo yar askari sare. Cayaartu waa mid aad u xusuusinaysa wixii lagu arkay dhacdadii mahadcelinta aragtida qofka-koowaad, laakiin isagoo xoojinaya muuqaalkeeda FPS (Qofka ugu horreeya ee wax toogta), isagoo aan ahayn Wicitaan Waajibaad ama DOLQAAD. Ciyaarta ayaa leh Si aad u muran badan ayaa loo sii daayaa iyada oo ay ugu wacan tahay noocyadeeda konsole ee hadda jira, oo leh waxqabad aad u liita iyo khaladaad isdaba-joog ah oo garaafyo ah oo khibradda ka dhigaya wixii aan laga fileynin, laakiin haddii aan haysanno PC-ga wanaagsan, PS5 ama Taxanaha X, waxaan ku raaxeysan doonnaa mid ka mid ah cayaarahaas oo calaamadeeyay xilli.
Witcher 3 The
Sagaar kale oo weyn oo CDProjecktRed ah oo aan lagu waayi karin wax kasta oo ka mid ah isu-geynta RPG, shaki la'aan waa inuu yahay saaxir. Geralt of rivia, nin leh awoodo aan caadi aheyn natiijada ka soo baxday tijaabooyin adag oo ay sameeyeen sixiroolayaal iyagoo ujeedkoodu yahay inay abuuraan nin leh awood dagaal oo uu kula dagaalamo xayawaanada ugu daran uguna badalo lacag aad u tiro badan. Ciyaartaani waxay sheegeysaa sheekada dabeecaddan, oo lagu dejiyey waagii dhexe halkaas oo marka lagu daro wajahida qaar ka mid ah dugaagga xun waxaan sidoo kale ka yeeli doonnaa kuwa ugu xoogga badan.
Marka lagu daro helitaanka qorshe weyn oo aad u xiiso badan oo xiraya saddexda, waxaan leenahay khariidad weyn oo ay ka buuxaan hawlgallada labaad, kuwaas oo aan ka heli karno guddiyo loogu talagalay saaxiradda, sida ku dilo bahal lacag ama raadso dad lumay adigoo ku mahadsan awooddaada raadinta weyn. Hormarinta hubka ama awoodaha sixirku ma maqnaan doono, marka lagu daro in aan u isticmaali karno cadarro laga sameeyay dhirta seefteenna, Gealt wuxuu adeegsanayaa laba seef, midna wuxuu wajahayaa dadka, midna wuxuu ka sameysan yahay qalin si uu u wajaho noolaha. Haddii aad taageere u tahay RPG-ga iyo adduun-weynaha qarniga dhexe ayaa ku soo jiita, ciyaartaani waxay shaki la’aan kaa dhigi doontaa inaad jacayl gasho. Waxaan ka helnaa iyada oo loo heli karo dhammaan barnaamijyada.
Layaab iyo lama filaan ah bilowga sanadka 2020, ciyaar gebi ahaanba bilaash ah oo ay weheliso lacag-bixinno yaryar oo ciyaarta ah. Waxaan filan karnaa miisaaniyad hoose, ciyaar jilicsan, laakiin sinaba maahan, Kani waa mid kamid ah ciyaaraha samir la'aanta sanadkaan. Quruxdeeda waxay na xasuusinaysaa Nintendo's Zelda Breath of the Wild. Waa balwad, dheer, iyo madadaalo badan, Shaki la'aan ciyaar naga dhigaysa mid aan ku xirnayn iyada oo aan loo isticmaalin hal euro.
Sida kuwii hore ee liiska ku jiray, waa adduun furan oo lagu baadho laguna la dagaallamo noolaha ugu xun. Waxaan leenahay dareenkaas joogtada ah ee horumarka iyo in kastoo aan hayno cunsurro ka dhigaya ciyaarta mid sahlan oo ku saleysan lacagaha yaryar, waan ku raaxeysan karnaa annaga oo aan waxba ku qaadanayn innagoo ciyaarno saacado iyo saacado. Cayaartu waxay leedahay qol badan oo wax lagu hagaajiyo waxayna si joogto ah u heshaa warar cusub. Waxaa loo heli karaa dhammaan barnaamijyada laakiin waxay ku taal PC iyo PS5 halka ay sida ugu fiican ugu shaqeyso.
Kii kahoreeyay ee sumcad xumida Fallout, waxay na geynaysaa adduun uu halakeeyay dagaal nukliyeer. Ciyaartani waxay na siinaysaa xorriyad weyn oo waxqabad, Waxaa lagu soo saaray aragti dusha sare ah, oo na siineysa aragti durugsan oo dhinaca dagaalka ah waxayna siisaa taabasho aad u qaas ah oo gaar ah oo lumaya. Waxay sidoo kale ilaalisaa dagaal-ku-saleysan ku-saleysnaan iyo go'aan-qaadasho oo muhiim u noqon doonta horumarka tacaburkeenna.
Waan ku raaxeysan karnaa RPG-gaan cajiibka ah adigoon ciyaarin kuwii hore Sagaarka iyadoo aan la dareemaynin inaan wax naga maqanahay, in kastoo aan arki doonno il-duuf iyo tixraacyo loogu talagalay taageerayaasha taxanaha. Wax cusub oo aan horay loo arag ayaa ah iskaashatada internetka ee nolosha siin doonta nolol badan iyadoo si qayaxan loo dheereynayo nolosheeda waxtarka leh. Cayaartu waa mid loogu talagalay PC iyo consoles-ka, laakiin waxaan kula talinayaa inaad ku ciyaarto PC-ga illaa aan ka heysano PS5 ama Series X.
Ciyaarta si toos ah uga cabi doonta taxanaha dhacdadii dhacday, oo uu abuuray Obsidian, soosaarayaasha caanka ah Fallout New Vegas. Marka ugu horeysa waxaan arki doonaa in ciyaartu ficil ahaan tahay nuqul kaarboon waxa aan ku arki karno taxanaha Fallout taasna macnaheedu maahan inay tahay nuqul, waxaa la dhihi karaa qaybo badan ayaa hagaajiya. Waa ciyaar adduun furan oo ka kooban nuxur iyo hawlgallo labaad, laakiin ma dayacdo sheekadeeda ugu weyn gabi ahaanba, sheeko inaga turjumeysa dabeecad ka kacda hurdo hurdo waqti aan isaga aheyn waana inaan ku hanuuninaa saynisyahan si aan u ogaanno waxa dhacay.
Ficilku wuxuu ku dhacayaa qofka koowaad, marka isticmaalka hubka oo ujeedadiisu aad u sifeysan tahay ayaa la fududeeyay. Sida CP2077, maahan qof toogasho-koowaad ah, sidaa darteed ma filan karno inay udhaqaaqdo sida Wicitaanka Waajibaadka, laakiin aad iyo aad u qoto dheer tan iyo markii horumarin kastaa ay saameyn ku yeelanayso dhaawacayaga ama difaaca. Laakiin wax walbaa dagaal ma noqon doonaan, waxaan sidoo kale sii wadi karnaa howlo badan oo qarsoodi ah anagoo kaashaneyna deegaanka. Ciyaartan waxaa loo heli karaa dhammaan barnaamijyada, oo ay ku jiraan PC-ga.
Yaxaas Hunter Adduunka
Shaki la'aan qaybta ugu fiican ee barwaaqadan iyo bogaadinta leh, waa mid ka mid ah ciyaaraha ugu iibka badan ee Capcom, ciyaar ugu dambayntii u soo baxday kombuyuutarrada iyo kombiyuutarrada kombuyuutarka ah (oo lagu arki jiray iyaga oo keliya kumbuyuutarrada gacanta). Waxaan hor taaganahay ciyaar dheecaan badan, dabiici ah oo qancisa oo la ciyaaroHawlaha fudud sida uruurinta qalabka ayaa hadda la sameeyaa iyadoo lagu dhex wareegayo masraxa. Nidaamka dagaalku waa la safeeyey oo hadda waa la sii dhaqaaqayaa, isdhexgalka deegaanka ayaa aad uga hodansan.
Ciyaartan waxaan ku ciyaareynaa ugaadhsade bahal ah oo howsheenu waxay noqon doontaa inaan dilno wuxuush abaalmarinno xiriir ah. Dareenka horumarka ayaa ah mid joogto ah weligoodna ma dareemeyno inaan qabanay howl aan saameyn ku yeelan kooxdeena ama dabeecadeena. Waxaan heysanaa ilaa 14 nooc oo hub ah mid walbana waa uu ka duwan yahay midba midka kale, in dareenkayaga marka aan badaleyno uu lamid yahay ciyaarta oo la badalo. Yaanan iloobin in aanu ciyaar ciyaar ahayn, markaa waa inaan adeegsanno xeelado kala duwan si aan uga adkaanno bahallada kala duwan, sida qishka ama raadinta barahaaga daciifka ah. Qaybtani taxanaha ah waxaa loo heli karaa kombuyuutarrada kombiyuutarka iyo kumbuyuutarrada oo dhammaantoodna waxqabadkiisu waa mid cajiib ah.
Waa qaybtii kow iyo tobnaad ee mid ka mid ah riwaayadaha door-ciyaarista sagas ee Japan. Tartanku wuxuu xusayaa 30 sano oo xorriyadeed ah waxayna ku jilaysaa wiil dhalinyaro ah oo 16 jir ah oo u kicitimaya safar si uu u ogaado mustaqbalkiisa dhabta ah isaga oo la jooga koox jilayaal kala duwan ah. Waxaan helnaa war aad u wanaagsan oo aan uga ciyaarno sida dhacdooyinka waawayn iyo horumarka dagaalka ee xoojiya waxqabadka xulafadeenna oo noo oggolaada inaan silsilado ku qaadno. Dagaalladu waxay leeyihiin taabasho aad u heer sarreysa tan iyo markii ay u socdaan si isdaba-joog ah waxaanan u baahanahay inaan si fiican uga fikirno dhaqdhaqaaq kasta haddii aan dooneyno inaan guuleysano.
Xaaladdaha ayaa si ballaadhan u ballaariyay taas oo noo oggolaanaysa sahamin aan horay noogu dhicin sagaalka. Akira Toriyama (Naqshadeeyaha DragonBall) ayaa mar kale masuul ka ah sameynta jilayaasha si dabeecad leh oo sheekadani ku raaxeysato, oo ka farxisay dhammaan taageerayaasha anime ee reer Japan. Quruxdeeda ayaa u roon isha sida ay midabkeeda u tahay. Geedka xirfaddu aad buu u weyn yahay, sidaa darteed horumarka dabeecadeena ayaa noo horseedi doonta inaan dooneyno inaan aad u sii ciyaarno. Qeybtaan waxaan sidoo kale ku leenahay been abuur noo ogolaanaya inaan horumarino hubkeena ama soo saarno kuwa cusub, oo si qoto dheer u siinay xulitaankeena hubka. Ciyaarta waxaa loo heli karaa PC iyo ku dhowaad dhammaan qalabka.
Haddii aad ka badan tahay kaararka nasashada ee nasashada marka loo eego doorka lagu ciyaaro adduunyada cajiibka ah ee la dagaallamaya cadawga, Eeg maqaalkan halka aan ku soo bandhigeyno kaararka ugu fiican ee kombuyuutarka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Internet » Ciyaaraha doorka ugu fiican ee kombuyuutarka
Desktop fog laga bilaabo Mac ilaa Windows
Khiyaanooyinka inaad khabiir ku noqoto Fortnite